Hiara-hisakafo eo amin’ny zaridainan’ny Tetik’asa Mendrika – FJKM Ambavahadimitafo Hiara-hisakafo eo amin’ny zaridainan’ny Tetik’asa Mendrika |
Hiara-hisakafo eo amin’ny zaridainan’ny Tetik’asa Mendrika
Publié le 12 novembre 2009 à 08:11
Mampandre ny mpikambana sy ireo izay te hanantevi-daharana ny sampana fa ny alahady 15 Novambra 2009 dia hisy fiaraha-misakafo izay atao ao amin’ny zaridainan’ny Tetik’asa Mendrika, etsy avaratry ny fiangonana. Iangaviana mba samy hitondra ny sakafony sy ny fitaova-pihinana (vilia sy sotro ary ny vera). Izany dia atao ao aorian’ny fiangonana maraina
26/06/2022 A la une . Fanompoam-pivavahana . Toriteny
Fa ny aminay kosa, dia Jehovah no Andriamanitray, ka tsy mba nahafoy Azy izahay
Alahady 26 Jona 2022, fetim-pirenena malagasy faha-62 taonan’ny fahaleovantena, natokana hitondrana am-bavaka ireo zokiolona eto amin’ny fiangonana. Ny tenin’Andriamanitra nitondran’ny mpitandrina Randrianarisoa Alain ny hafatr’Andriamanitra dia ny tao amin’ny IITantara 13 : 10 » Fa ny aminay kosa, dia Jehovah no Andriamanitray, ka tsy mba nahafoy Azy izahay; ary ny mpisorona izay manao fanompoam-pivavahana ho
19/06/2022 A la une . Fanompoam-pivavahana . Toriteny
Alahady fetin’ny ray, alahadin’ny Vokovoko manga
Alahady 19 jona 2022, ankalazana ny fatin’ny ray, alahadin’ny sampana Vokovoko Manga manerana ny FJKM, mbola hibanjinana ny lohahevitra hoe « Mampanjaka ny fahefany ny Tompo ». Ny mpitandrina miza-draharaha Randriambinintsoa Onja no nitondra ny hafatr’Andriamanitra avy ao amin’ny Apokalipsy 12:7-12 » 7Ary nisy ady tany an-danitra: Mikaela sy ny anjeliny niady tamin’ilay dragona; ary ilay dragona
12/06/2022 A la une . Fanompoam-pivavahana . Toriteny
Efa nohenoiko ny fitarainanao, ary efa hitako ny ranomasonao; indro, hahasitrana anao Aho
Alahady 12 jona 2022, alahadin’ny Sekoly FJKM, alahadin’ny Trinite, hibanjinana ny lohahevitra hoe « Mampanjaka ny fahefany ny Tompo« . Ny mpitandrina Randrianarisoa Alain no nitondra ny hafatr’Andriamanitra avy ao amin’ny 2Tantara 20 : 5 – 9 : « Miverena, ka lazao amin’i Hezekia, mpanapaka ny oloko, hoe: Izao no lazain’i Jehovah, Andriamanitr’i Davida rainao: Efa nohenoiko ny
05/06/2022 A la une . Fanompoam-pivavahana . Toriteny
Pentekosta 2022 : feno ny Fanahy Masina izy rehetra ka nitory ny tenin’Andriamanitra tamin’ny fahasahiana
« Miorena tsara, aza miova » Alahady Pentekosta 05 Jona 2022, fankalazana an’Andriamanitra tamin’ny nandrotsahany ny Fanahy Masina voalohany tamin’ny fiangonana; tsingerintaonan’ny fiangonana ihany koa satria feno 1989 taona ny fiangonana. Ny mpitandrina Randrianarisoa Alain no nitondra ny hafatr’Andriamanitra avy ao amin’ny Asan’ny apostoly 4 : 31 « Ary rehefa nivavaka izy dia nihovitrovitra ny trano izay niangonany,
02/06/2022 A la une . Jobily 25 taona Past. Alain Randrianarisoa . Vaovaom-piangonana
Efa ho 2 taona no tsy nanatanteraka fitsangatsanganana ny FJM Ambavahadimitafo noho ny toe-draharaha ara-pahasalamana izay fantantsika. Koa am-pifaliana tokoa no hifanentanantsika amin’izany ankehitriny. Amin’ny Alatsinainy Pentekosta 06 Jona 2022 no ho tanterahina eny Antsofonondry Avaradrano ny fitsangatsanganan’ny FJKM Ambavahadimitafo, izay hanasàna antsika kristiana tsy an-kanavaka sy ny zanaka am-pielezana. Ankoatran’ny fikarakaran’ny Biraon’ny fitandremana miaraka
29/05/2022 A la une . Fanompoam-pivavahana . Toriteny
Alahady fetin’ny reny 2022
Alahady 29 mey 2022, ankalazana ny fetin’ny reny ka nitondra am-bavaka manokana azy ireo androany teto @ FJKM Ambavahadimitafo. Ny Sekoly Taninketsa no nitondra ny toriteny an-kira nandritra izany fanompoam-pivavahana izany. Manasa anao hiombona amin’izany fotoana izany : Manantitra ny firariantsoa ho an’ny reny izahay eto amin’ny site web, ho feno fifaliana sy fahasoavana avy